Ny mpanohitra foana e !
Mbola ity resaka fifanolanana noho ny raharaha Tana-masoandro ity izao no mitana ny sain’ny maro.
Samy manana ny heveriny fa rariny sy hitsiny avy any aminy avy na ny vahoaka tompon’ny tany na ny vahoaka. Ny mahagaga, toa tsy tena manana porofon-kevitra mafonja ny fanjakana, fa be loatra ny kinanga ary mipoitra tsikelikely, toy ilay taratasim-panjakana diso na niniana nodisoina ny daty. Rehefa tena halalinina ny zava-misy, tsy misy tena fakana ny hevitry ny vahoaka madinika tompon’ny tany, fa toa mahatoky tena amin’ny di-doha sy ny amboletra fanao hatrizay. Toa izay miteny rehetra zary lasa fihomehezana noho ny hevitra taingina sy toa tsy mitombina na ilay antsoin’ny vazaha hoe: “argument bidon”. Ny tena re dia ny hoe zon’ny fanjakana no maka ny tany ho an’ny tombontsoan’ny besinimaro. Besinimaro iza avy aloha io fa tsy mazava ? Nambaran’ny minisitra iray aza, fa oharina amin’ny tokantrano izay ohatra akaiky, hono, ka raha hitarina ve ny tokantrano iray eto an-drenivohitra fa tsy ampy mpianakavy mety 2 tany aloha ka nitombo lasa 6 dia any Ivato, fa tsy eo ihany. Ilay tokotaniny izany no tokony hanitarana azy, ka totofana ohatra ny tanimboly na zaridaina eo akaiky hahafahana manitatra. Fa izy mianakavy kely ve no hisitraka ilay hatsangana eo amin’ilay fanitarana sa ho lasan’ny mpanam-bola mety ho vahiny na tompon-tany ? Ny ankizy izany mety ho lasa mpiasa an-trano na mpanampy ao amin’ilay homena hanototra sy hanitatra, ary ilay fambolena na fivelomana kely teo ivelany efa lasa nasiana zavatra hafa tsy azy. Fihemorana sa fandrosoana raha miainga amin’ny fiainan’ilay ankohonana iray ? Mora ny manamaivana resaka rehefa tsy eo amin’ny toeran’ny mety ho lasibatra. Eto ihany koa tsy misy manohitra ny tetikasa, izay tsara sy tokony hotanterahina, saingy ny fomba hoenti-manao azy, ny toerana no olana, saingy ny kely tsy mba mamindro sy ny amboletra, ny tsy fihainoana ny hafa,… no fomba fiasa. Zary voizina aza ny hoe: ny mpanohitra no ambadik’io. Ny tsy fahombiazana rehetra dia ny mpanohitra fa ny zavatra tsara nataon’ireo notoherina fahiny izay tsy nisasarana kanefa hireharena ankehitriny lazaina fa velirano fa tsy hoe : ny mpanohitra no tena nanao an’io.